You na-enyere ecommerce? Ihe kacha mkpa | ECommerce ozi ọma
Nwere ike ịkwado ecommerce gị site na ịrịọ maka enyemaka maka ndị ọchụnta ego na ndị nweere onwe ha chọrọ ịzụlite ha ọrụ ọkachamara na ecommerce. Iche ihu ọkwa mbụ ya, nke kachasị sie ike n'ọrụ ya site ugbu a gaa n'ihu. Na ma enwere nhọrọ iji nweta enyemaka, enyere ọtụtụ usoro ga - enyere gị aka imezu uche gị site ugbu a gawa.
Appreci nwere mmasị na nke ahụ ma e wezụga zụọ ngwaahịa, ụgwọ ọrụ, na teknụzụ na-akwado, wdg, enwere ego ga-akwụ ụgwọ ị ga-eburu n'uche kwa ọnwa? Nke a bụ otu n'ime mkpa mbụ ị kwesịrị ịtụ anya mgbe ịmalite azụmahịa nke njirimara ndị a. Ebee ka gha ewere n'ime ihe bu ihe ichoro di na ahia gi ma oburu na uzo ndi a gha emeghe profaịlụ nke ulo ahia ma obu ahia intaneti nke ichoro.
Maka na ị gaghị echefu na njem enyemaka a. N'otu aka, a na-agwa ndị enweghị ọrụ debanyere aha ha dị ka ndị ọrụ were onwe ha, ndị ọrụ onwe ha na atụmatụ Social Security ma ọ bụ na uru ha na ibe ha metụtara, ma ọ bụ nwee ike ịrịọ enyemaka a. N'aka nke ọzọ, ndị mmadụ nyere maka na ọkwa gara aga, ndị bụ ndị otu ụlọ ọrụ obodo, obodo ndị nwere ihe onwunwe, yana ndị mmekọ nke ụlọ ọrụ azụmahịa.
1 Ebumnuche bụ isi nke onyinye ndị a
2 Mmetụta na azụmahịa dijitalụ
3 Kedu ndị enyere ndị a?
4 ICO Ebe E Si Nweta Azụmaahịa: Maka onye?
5 Gịnị kpatara enyemaka ego a ji dị mkpa?
Ebumnuche bụ isi nke onyinye ndị a
N'okwu niile, enwere ebumnuche akọwapụtara nke enyere ọtụtụ ụlọ ọrụ dijitalụ aka, n'agbanyeghị ụdị ya. N'ime ndị na-apụta ìhè ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru:
Zụlite usoro nke na-enye ndị ọchụnta ego ọtụtụ usoro iji were echiche dị nro na nke dị mma maka ihe ọhụrụ.
Kwado ụlọ ọrụ obere na ndị obere na mmepe mmepe iji tinye omenaala ọhụụ.
Gbaa ume ka e kere eke nke netwọkụ azụmahịa na-akwalite mgbasa nke ihe ọmụma na omume kacha mma.
Na-ahụ maka ịnyefe teknụzụ na ihe ọmụma site na ụlọ ọrụ ọha na eze na nke onwe na ndị ụlọ ọrụ obere na nke obere.
Ebee, na dị ka ihe ọhụrụ, na ozugbo nchoputa nke nyocha ahụ gwụchara, ị ga-enwe ike itinye n'ọrụ na ụlọ ọrụ gị nkwupụta ọhụụ nke akọwapụtara na mpaghara nke gara aga yana nke dị mkpa iji melite asọmpi. Yabụ na n'ụzọ a, na site n'oge a gaa n'ihu, ụlọ ọrụ ntanetị gị nwere ike ịnata ihe ruru 75% ma ọ bụ 80% Onyinye maka mmalite
N'ọnọdụ ọ bụla, ụdị usoro akụ na ụba ndị a bụ maka mkpa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ dị na mba anyị na-enweta n'ahịa asọmpi na-arịwanye elu dị ka dijitalụ na nke ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa na-anọchi anya ya.
Mmetụta na azụmahịa dijitalụ
Nkuchi nke a eCommerce na-amanye ụlọ ọrụ ime mgbanwe na usoro ha, webata teknụzụ ọhụrụ ma megharia ma mekwaa usoro mmeputa ya na ire ya, ihe nile ka ha wee nweta ahia ohuru nke n’enweghi ike n’usoro omenaala. Mana nke a chọkwara ọzụzụ zuru oke maka ndị otu ya niile.
Ngwa nke ụdị ọrụ gọọmentị na nkeonwe nwere mmetụta kpọmkwem na steeti ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, n'ọnọdụ ndị a, anyị ga-akọwara gị n'okpuru:
Site na otu isi, ihuenyo ahụ, ị ​​nwere ohere ịnweta ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa na-enweghị ngwụcha, ya na ya nwere ụdị ngwaahịa dịgasị iche iche. Nke a na - enye gị ohere iji tụnyere ma gosipụta nhọrọ dị iche iche na ezigbo oge, ma họrọ nke kachasị mma maka mkpa gị.
Tonweta n'ahịa zuru ụwa ọnụ
Transportationgbọ njem dị ọnụ ala karịa na ijikọ ụwa ọnụ emeela ka azụmahịa mba dị n'etiti nwee ike. Azụmahịa elektrọnik emeela ka ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahia dị mfe nke ukwuu, na-agbasa oke ma tinye ahịa zuru ụwa ọnụ n'otu pịa.
Otu uru dị na Ecommerce bụ na ịnwere ike ịkpọ ndị ọrụ were ụgwọ ọnụ ahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịkpọ ndị mmadụ n'ọrụ na mba ebe ọnụahịa obibi ala dị ala. Uru ọzọ bụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị anaghị achọ ọnụọgụ ndị ọrụ na ụlọ ahịa anụ ahụ, ọ dịghị mkpa ka ị were ndị ọrụ iji wepụta ụlọ ahịa ahụ. Na mbido, ị nwere ike iji aka gị rụọ ọrụ azụmaahịa dijitalụ gị.
Kedu ndị enyere ndị a?
Ndị ọrụ onwe gị, ndị ọchụnta ego na ụdị ụlọ ọrụ ọ bụla, ma ndị Spain ma ndị mba ọzọ na-achọ ịme azụmahịa na / ma ọ bụ itinye ego, na-ekpuchi mkpa ma ọ bụ mmefu ego n'ime mpaghara mba.
Ndị mmadụ n'otu n'otu na obodo nke ndị nwe ha chọrọ ịgbanwe ụlọ ha ma ọ bụ ụlọ ha.
Ebee ka m ga-arịọ ya?
Kpọmkwem site na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ.
Onu ego kachasị elu maka ndị ahịa: ihe ruru nde euro 12,5, n'otu ọrụ ma ọ bụ karịa.
Omume azụmahịa na / ma ọ bụ itinye ego na itinye ego na ya n'ime mpaghara obodo.
Ndozigharị ụlọ na ụlọ.
Modality: mgbazinye ego, mgbazinye, ịgbazite ma ọ bụ akara nke kredit.
Mmasị mmasị: edozi ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe, gbakwunyere oke nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ guzobere dịka usoro ịkwụ ụgwọ.
Amortization na oge amara:
Site na 1 ruo 20 afọ na ohere nke afọ 3 amara oge dabere na usoro ndị ahụ.
Commlọ Ọrụ: ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ nwere ike ịkwụ ụgwọ otu ọrụ na mbido ọrụ ahụ, na mgbakwunye, ebe o kwesịrị ekwesị, ụgwọ ịkwụghachi oge mbụ.
Nkwa: ka ụlọ ọrụ kredit kpebisie ike, belụsọ SGR / SAECA.
Ndaba: mgbazinye ego site na Line a nwere ike ịdebanye aha ya n'afọ niile 2020.
ICO Ebe E Si Nweta Azụmaahịa: Maka onye?
Ndị ọrụ onwe ha, ndị ọchụnta ego na ụlọ ọrụ nwere ụlọ ọrụ edebanyere aha na Spain ndị chọrọ ịnweta ego site na ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ọnụahịa sitere na azụmaahịa azụmahịa ha na mpaghara mba, ma ọ bụ iji kpuchie mmepụta nke ngwaahịa ndị erere na Spain.
Oke ego kwa onye ahịa: ruru 12,5 nde euro nke pụtara ìhè itule kwa ahịa na afọ, na otu ma ọ bụ karịa arụmọrụ.
Ofkpụrụ nke ọrụ: ụdị nkwekọrịta ego nke ndị ahịa na Ebe E Si Nweta kwetara.
Ofdị mmasị: Agbanwe agbanwe, gbakwunye oke nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ guzobere.
Ụlọrụ: Ebe E Si Nweta Ebe E Si Nweta nwere ike ịkwụ ụgwọ otu ọrụ na mbido ọrụ ahụ, na mgbakwunye, ebe o kwesịrị ekwesị, ụgwọ ịkwụghachi oge mbụ.
Nkwa: Ikpebi site na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ.
Ezigbo ike: enwere ike ịhazi arụmọrụ nke Line a n'afọ niile 2020.
na micro-bank microcredits Ha zuru oke n’ihi na inwere ike ịchọta kredit nke dabara na ihe niile ịchọrọ n’oge niile.
Microcredit ndị ọchụnta ego na azụmaahịa. Nke a na ụdị Ebe E Si Nweta na-eche na-enweta uru nke a ego maka ndị chọrọ ịmalite a ahịa ohuru ma ọ bụ na ha kwụụrụ onwe ha na ha nwere nsogbu n’inweta ego n’ihi na ha enweghị ego. Maka ndị ọrụ onwe gị, ekwesịrị iburu n'uche na ị ga-enwerịrị ego kwa afọ nke euro 60.000. Companieslọ ọrụ Micro kwesịrị inwe ihe na-erughị ndị ọrụ 10 dị ka ihe dị mkpa achọrọ. N'okwu ikpe ikpeazụ, ntụgharị agaghị agafe euro 2.000.000 kwa afọ.
Gịnị kpatara enyemaka ego a ji dị mkpa?
Kinddị enyemaka a maka ịmalite azụmaahịa dijitalụ ma ọ bụ site na Internetntanetị nwere ike ịbụ ngwaọrụ dị mkpa ịchọrọ iji tinye echiche ahụ na ị na-eche ogologo oge n'ahịa. Ma n'ihi na ị nweghị ego zuru oke, ị na-egbu oge ma na-egbu oge maka ọnwa ma ọ bụ ọbụna afọ. Ma ugbu a bụ oge iji malite ya na obere ego iji kpuchie mkpa ndị kachasị mkpa a na-achọ n'ụdị azụmahịa a pụrụ iche.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, anyị enweghị ike ichefu eziokwu ahụ bụ na ọ dị mkpa iji nweta ọtụtụ ọnọdụ. Kpamkpam oge kachasị dị mgbagwoju anya n'ihi enweghị ego, ọkachasị ego. Na nke eji mepụta ngwa ahia ego nke n’enye ego di ala. Ha oscillate n'etiti 5% na 7%, a di na nwunye nke pasent isi ala karịa ụdị na-iji na nzuzo ahịa. Site na uru ozo di na eziokwu na a na-ere ha na ngụkọta ụgwọ na ọrụ na mmefu ndị ọzọ na njikwa na ndozi ha.
N'aka nke ọzọ, ekwesịrị ịdeba ama na azịza ego a nke na-aga azụmaahịa kọmputa dị, ma na steeti ma ọ bụ mpaghara mpaghara yana na onyinye ndị nnukwu akụkụ nke ụlọ ọrụ kredit na-emepe. Na ụdị dịgasị iche iche nke dabere na profaịlụ nke ndị na-enyocha ngwa ndị a na mpaghara dijitalụ gosipụtara. Site na ebe ị nwere ike nweta ego izizi iji malite azụmaahịa ọnlaịnụ nke ị na-eche ogologo oge. Ma na mbido ma na mmepe nke ya kemgbe ọtụtụ afọ. Nke ahụ bụ, mgbe ndị ọchụnta ego chọrọ enyemaka ego iji mezuo ebumnuche ọrụ ha. Maka ndị chọrọ inweta ego site na ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ọnụahịa sitere na azụmaahịa azụmahịa ha na mpaghara mba, na-achọ naanị ịtọlite ​​azụmahịa n'ịntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » You na-enyere ecommerce? Ihe kacha mkpa